Tonga tamin’ny alina tetsy amin’ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato, tamin’ny 11 ora sy sasany mahery dimy minitra ny fiaramanidina nitondra ilay solotenan’ny Papa Ray Masina ny kardinaly Pietro Parolin. Raha ny voalaza dia fankalazana ny faha-50 nifandraisan’i Madagasikara tamin’i Vatican no tena anton-dian’ity solotenan’ny Papa François eto amintsika ity. Amin’ny alahady ho avy izao kosa no hisy ny sorona masina lehibe izay ho tanterahina etsy amin’ny kianjaben’i Mahamasina manomboka amin’ny 9 ora maraina.
Araka ny fantatra, fanaovan-tsoniam-piaraha-miasa efatra no nosoniavina nandritra ny fitsidihan’ny filoha tiorka, Recen Tayyip Erdogan, teto Madagasikara. Ny voalohany dia teo amin’ny sehatry ny raharaham-bahiny, ny faharoa dia teo amin’ny fifanakalozana antotan-taratasy sy fifanakalozam-baovao eo amin’ny firenena roatonta, fahatelo eo amin’ny lafiny ara-toe-karena ary farany dia ny fiaraha-miasan’ny fanjakana tiorka amin’ny onjam-peo sy ny fahitalavitra eto Madagasikara.
Mihatrana am-bava basy
Mihatrana am-bava basy amin’izao fotoana izao ny mpitandro filaminana eto Madagsikara nanomboka tamin’ny fahatongavan’ny filoha Tiorka teto amintsika ary mitohy amin’izao fitsidihan’ny solotenan’ny Papa Ray Masina, ny kardinaly Pietro Parolin izao. Araka ny ahitana azy eny an-dalam-be dia marobe ireo zandary miaraka andiany manao fisafoana, tsy vitsy ihany koa ireo polisy mirimorimo amin’ny fiara tsy mataho-dalana mivezivezy eran’ny arabe.